यसरि दिईन् अञ्जलि अधिकारीले 'गीत'का लागि अडिसन, बन्लिन त प्रदिपको जोडी ? (भिडियो सहित) - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०७, २०७६ समय: २१:१९:४८
ईटहरी/ यतिबेला प्रेम गीत ३ को खुबै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । नया संगै पुराना पुस्ताको जम्बोटोली सहित प्रि प्रोडक्सनमा रहेको प्रेम गीत ३ टिम यतिबेला फिल्मको गीत क्यारेक्टरका कारण पनि निक्कै चर्चामा छ । सो क्यारेक्टरका लागि अडिसन आव्हान गरिएको थियो । २७ सयभन्दा बढी युवतीहरु अडिसनमा सहभागी थिए भने जसमध्ये एक थिइन् सबैमाझ परिचित अन्जली अधिकारी । हेर्नुस उनले यसरि दिएकि थिइन् अडिसन ।
अञ्जलि पछिल्लो समय गलबन्दीका कारण निक्कै चर्चामा आएकी हुन् । तर उनलाई चर्चामा ल्याउने गीता भने विवादको भुमरीमा फसेको छ । सो गीतको भिडियोमा उनको टिपिकल अभिनय र लजाउने शैली खुबै चर्चामा आयो । यता प्रेम गीत ३ को अडिसनमा गएपछि पनि उनको चर्चा झनै चुलिएर गरको छ । उनका सुभचिन्तक तथा फ्यानहरुले उनीनै फिल्मका लागि गीत बनिनु पर्छ भनिरहेका छन् । तर फिल्म युनिटले भने अहिले निर्णय सार्बजनिक गरिसकेको छैन । फिल्म निर्माता सन्तोष सेनका अनुसार निर्णय सार्बजनिक हुन अझै १ हप्ता जाति लाग्ने छ । यस्तै सेनले कुराकानीका क्रममा २५ मध्ये २ जना सबिना खड्का र तमन्ना केसी भने गीता बन्ने चान्स निक्कै कम रहेको बताए ।
नामैले ब्राण्ड बनिसकेको ‘प्रेम गीत’को तेश्रो सिरिज मा पनि ‘प्रेम’ को भूमिकामा अभिनेता प्रदीप खड्का रहनेछन् । यसको दुई सिरिजमा पनि उनी नै प्रमुख भूमिकामा थिए । चलचित्रलाई छेतेन गुरुङले निर्देशन गर्दैछन् । उनलाई निर्देशनमा ‘प्रेमगीत’ सिरिजका निर्माता सन्तोष सेनले सघाउनेछन् । चलचित्रको कथा छेतेनको हो । टिमले पहिलो चरणको अडिसन पश्चात २५ जनाको ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक गरेको थियो । सो २५ को अडिसन भिडियो हरु यतिबेला धमाधम निर्माण युनिटले सार्बजनिक गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालि मोडलिङ्ग मा स्थापित मोडल देखि सिने क्षेत्रमा उदाउदै गरेका नव अभिनेत्री संगै सिने उधोगमा प्रवेशको बाटो खोजिरहेका नव प्रतिभाहरु समेत यो गीतको अडिसनमा सहभागी भएका थिए । आ-आफ्नो तर्फबाट सबैजना उत्कृष्ट रहेको निर्माण टिमको तर्क छ । आउँदो चैत २८ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको फिल्मको पहिलो पार्टमा अभिनेत्री पूजा शर्मा र दोश्रो पार्टमा अश्लेशा ठकुरी ‘गीत’ को भूमिकामा थिइन् । अब, प्रदीपसँग रोमान्स गर्ने युवती अर्थात् ‘गीत’ को हुनेछिन् ? धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ । केही हप्ता अगाडि निर्माण कम्पनी आशुसेन फिल्मस्ले ‘गीत’ को भूमिकाका लागि अडिसन आह्वान गरेको थियो ।